▷ Black Friday on Apple Watch: iibka ugu fiican | IPhone news
Jimcaha madow watch tufaax
Qolka Ignatius | 27/11/2021 08:00 | La cusbooneysiiyay 27/11/2021 10:20 | Apple Watch
Noofambar 26, Black Friday waa la dabaaldegaa, mid ka mid ah maalmaha ugu wanaagsan sanadka horay u soo iibsiga Kirismaska. Haddii aad qorsheyneyso inaad cusboonaysiiso Apple Watch-kaagii hore ama aad iibsato Apple Watch-kaagii ugu horreeyay, Jimcaha Madoow ayaa ah maalinta ugu fiican ee la sameeyo, maadaama uu soo dhawaado Kirismaska, qiimayaashu way kordhi doonaan oo waxay noqon doontaa wax aan macquul ahayn in la helo soo jeedin.
Sidii sannadihii hore, Black Friday ma socon doonto oo keliya hal maalin, laakiin way socon doontaa waa la kordhin doonaa maalmihii hore, oo dalabyada ugu horreeya waxay bilaaban doonaan Noofambar 22 waxayna dhammaan doonaan Noofambar 29 iyadoo la adeegsanayo Black Friday. Dabcan, maalinta ugu muhiimsan waxay sii ahaan doontaa 26th, maalinta Jimcaha Black Friday si rasmi ah loo dabaaldego.
1 Waa maxay moodooyinka Apple Watch ee lagu iibinayo Jimcaha Madow
1.1 Apple Watch Taxanaha 6
1.3 Apple Watch Taxanaha 3
1.4 Apple Watch Taxanaha 7
2 Maxay mudan tahay iibsashada Apple Watch Jimcaha Madow?
3 Intee in le'eg ayay Apple Watch caadi ahaan hoos u dhigtaa Jimcaha Madoow?
4 Intee in le'eg yahay Black Friday on Apple Watch
5 Halkee laga heli karaa heshiisyada Apple Watch inta lagu jiro Black Friday
5.3 Maxakamada Ingriiska
Waa maxay moodooyinka Apple Watch ee lagu iibinayo Jimcaha Madow
Apple Watch Taxanaha 6
Taxanaha Apple Watch 6 ...
TOP Black Friday dalab
Taxanaha 6 waa mid ka mid ah fursadaha ugu fiican ee la heli karo maanta haddii aad rabto inaad iibsato Apple Watch. Farqiga kaliya ee u dhexeeya Apple Watch Series 7 ayaa ah in moodelkan cusub uu leeyahay cabbir weyn oo shaashad ah, iyada oo aan lagu darin wax hawlqabad cusub oo cusub.
Markii la bilaabay Taxanaha 7, Taxanaha 6 wuxuu noqday doorasho aad u fiican, ma aha oo kaliya sababtoo ah ayaa qiimihiisii ​​hoos u dhigay, laakiin sidoo kale sababtoo ah ma dayi doono mid ka mid ah hawlaha Taxanaha 7.
2021 Daawo SE (GPS) -...
JUVEL Compatible con...
Taxanaha Apple Watch 3 ...
Sannad suuqa ku jira, waxaan helnaa Apple Watch SE, oo ah moodal kaas nama soo bandhigto waxqabadyo isku mid ah in aan ka heli karno Taxanaha 6, laakiin haddii naqshad leh shaashad ka weyn Taxanaha 3.
Qaabkan sida caadiga ah waxaa laga heli karaa dalabyo, sidaas darteed lama waayi doono inta lagu jiro dabbaaldegga Black Friday.
Apple Watch Taxanaha 3
In kasta oo uu yahay moodelka Apple Watch ee ugu da'da weyn, la bilaabay Sebtembar 2017, Apple waxay sii wadaa iibinta qalabkan oo ay weheliso Taxanaha 7 iyo Apple Watch SE.
Waqtiga ay suuqa ku jirtay, ma adkaan doonto in la helo qaabkan qiimo ka badan oo xiiso leh, labadaba nooca 38 iyo 42 mm.
Taxanaha Apple Watch 7 ...
Taxanaha Apple Watch 7 waa jiilka cusub ee Apple Watch, jiil cusub oo suuqa ku jiray dhowr toddobaad. Lagama yaabo in inta lagu guda jiro dabaaldega Black Friday, waxaan helnaa qaar ka mid ah bixinta moodelkan cusub oo aan bixineynin wax shaqeyn dheeraad ah oo la leh jiilkii hore.
Isku day La maqli karo 30 maalmood oo bilaash ah
3 bilood oo Amazon Music bilaash ah
Isku day Prime Video 30 maalmood bilaash
Maxay mudan tahay iibsashada Apple Watch Jimcaha Madow?
Waxaan xaqiijin karnaa, annagoo aan ka cabsaneynin inaan khalad nahay, in waqtiga ugu fiican ee la iibsan karo Apple Watch ay tahay Jimcaha Madoow. Inta lagu jiro Jimcaha Madoow iyo inta lagu jiro kirismaska ​​labadaba, Shirkadaha intooda badani waxay rabaan inay iska tuuraan saamiyada kuwaas oo haysta badeecooyin duug ah si ay boos ugu helaan moodallo cusub oo horeba suuqa u yaalla ama soo socda.
Intaa waxaa dheer, dabbaaldeggani wuxuu dhacaa dhowr toddobaad ka dib markii la bilaabay Apple Watch cusub ee shaqada, sidaas darteed waa mid aad u fudud hel dalabyo xiiso leh oo moodooyinka jiilkii hore. Haddii aad rabto inaad iibsato Apple Watch laakiin aadan naftaada u sheegin, waxaad weli haysataa dhawr maalmood oo aad ku sameyso.
Intee in le'eg ayay Apple Watch caadi ahaan hoos u dhigtaa Jimcaha Madoow?
Sida badeecadaha kale ee Apple ay suuqa ku soo bandhigtay toddobaadyadii la soo dhaafay, sida iPhone 13 range, iPad mini iyo iPad-ka 7aad, ka hel moodelkii ugu dambeeyay ee Apple Watch, Series XNUMX, oo leh nooc qiimo dhimis ah. waxay noqon doontaa hawl aan macquul ahayn.
Si kastaba ha ahaatee, waxay noqon doontaa mid aad u fudud Ka hel dalabyo xiiso leh Apple Watch Series 6, nooc ah, toddobaadyadii ka horreeyay ilaa Black Friday, waxaan ku helnay qiimo dhimis ilaa 15% ah, labadaba noocyada 40mm iyo 44mm.
In kasta oo Apple Watch SE weli si rasmi ah loogu iibinayo iyada oo loo marayo Apple, ficil ahaan tan iyo markii la bilaabay had iyo jeer waxay diyaar u ahayd a Qiimaha ugu hooseeya ee Apple ee rasmiga ah ee Amazon, oo leh qiimo dhimis u dhexeeya 7 iyo 12%.
Marka laga hadlayo Taxanaha Apple Watch 3, oo ah nooc dhammaystay 4 sano suuqa, waxa uu noqon doonaa maad u fudud in la helo dalabyo ka hooseeya 190 euro, nooca 42mm, kan ugu qaalisan dhammaan.
Intee in le'eg yahay Black Friday on Apple Watch
Sida aan ku sheegay bilawga maqaalkan, Jimcaha Madoow waxa la qaban doonaa November 26. Si kastaba ha ahaatee, iyo sida caadiga ah, laga bilaabo Isniinta, Noofembar 22 ilaa Noofambar 29, Waxaan awood u yeelan doonaa inaan helno soo jeedinta dhammaan noocyada alaabooyinka, ma aha oo kaliya Apple Watch.
Si kastaba ha ahaatee, shirkadaha intooda badan dalabyada ugu fiican ayaa la keydiyay 26-ka. Haddii aad raadinayso Apple Watch ama qalab kasta oo kale si aad uga faa'iidaysato Black Friday, fursadaha waa in aad ka heli inta lagu jiro Black Friday laftiisa.
Halkee laga heli karaa heshiisyada Apple Watch inta lagu jiro Black Friday
Apple waligeed may saaxiibin qiimo dhimis nooc kastaba ha ahaatee, markaa ha filanin inaad ka iibsatid Apple Watch adoo isticmaalaya Apple Store online ama dukaamada jir ahaaneed ee shirkadda Cupertino ku leedahay Spain oo dhan.
Labada dammaanad iyo adeegga macaamiisha, Amazon waa mid ka mid ah dhufto ee ugu fiican marka la iibsanayo wax soo saarka Apple, ha ahaato Apple Watch, iPhone, iPad ah...
Apple lafteedu waa kan ka dambeeya dhammaan alaabooyinka Apple, oo mudan in la dhimo, taas oo aan ka heli karno Amazon, markaa waxay la mid noqon doontaa. si toos ah uga iibso Apple.
Xarumaha Mediamarkt, iyo sidoo kale mareegaha, waanu ka heli doonaa alaabta tufaax qabow, oo ay ku jiraan Apple Watch iyo iPhone inta badan.
El Corte Inglés kama waayi doono liiska xarumaha aan awoodno iibso Apple Watch iyo alaab kasta oo kale oo Apple ah oo ka badan qiimaha xiisaha leh.
Haddii aan rabno in aan isku dayno ka hor tijaabi, ku dhufo, oo ku dhufo Apple Watch kaaga Kahor intaanan iibsan, waxaan joojin karnaa K-Tuin, dukaanka ku takhasusay alaabada Apple.
Haddii aad rabto waa lacag fiican ku badbaadi iibsashada Apple WatchWaa inaad fursad siisaa ragga jooga Magnificos, oo ah shabakad ku takhasustay alaabada iyo agabka Apple.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Jimcaha madow watch tufaax
ipad jimce madow
Black Friday on Mac